ပရဟိတသမားနှစ်ဦး အိမ်ပြန်ခွင့် ရခဲ့ပြီ
ဆေးရုံမှာ (၁၈) ရက်တိတိ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ ဦးကျော်သူ နဲ့ ထွန်းကိုကို တို့ကတော့ ဒီနေ့မှာ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီလို့ ဦးကျော်သူက ဝမ်းသာအားရပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ဦးကျော်သူနဲ့ ထွန်းကိုကို တို့ကတော့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကနေ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီလို့ ဦးကျော်သူက ဝမ်းသာအားရပြောလာပါတယ်။ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ (၁၈) ရက်အကြာ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလှူအတန်းတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးကျော်သူရဲ့ သတင်းစကားကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။
" Fighting အသင့် ! အသင့် ! Fighting.အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျော်နဲ့ထွန်း အိမ်ပြန်ခွင့် ရပါပြီခင်ဗျား။ကိုဗစ်ကူးဆက်မှုကြောင့် ရက်ပေါင်း (၁၈)ရက်တိတိ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံခဲ့ရပါသည်။ ကုသပေးခဲ့ကြသော ဆရာဝန်၊ဆရာဝန်မများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ဝေဘာဂီဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့်တကွ ပြင်ပမှကျွန်တော်တို့အတွက် အဟာရဒါနပြုကြသော အလှူရှင်အပေါင်းတို့နှင့် အားပေးနှစ်သိမ့်မေတ္တာပို့ကြသော ညီ၊ ညီမငယ် အနုပညာရှင် များ၊ပရဟိတသမားများ၊မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများ၊ပြည်သူလူထုအပေါင်းအပြင်နေ့စဉ် ယနေ့တိုင် ဆေးရုံတက်သည်မှအစပြု၍ မေတ္တာဓါတ် ပို့လွှတ်ပေးနေကြသော ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားအပေါင်းတို့အား ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကာ သာဓု သာဓု သာဓုဟုခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်" ဆိုပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ မနက် (၁၀) နာရီခွဲကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဦးကျော်သူ အနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ သွေးရည်ကြည်ကုထုံး နှစ်ကြိမ် လုပ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်သလို သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းပေးတဲ့ အလှူရှင်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
" အထူးအားဖြင့် ကျွန်တော့်အား သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းလိုက်သော မမြင် လိုက်ရသည့် အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ပဋာန်းဆက် ( နှစ်ဦး) အားလည်း အထူးသာဓု သာဓု သာဓုဟု ခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက် ဆေးရုံသို့ပို့ပေးကြသောအမှတ်တရ မွေးနေ့ကိတ် များ၊ပန်းစည်းများ၊မွေးနေ့မေတ္တာစကားများ၊Fighting Group များအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့နေအိမ်အသီးသီးတွင်တစ်ပါတ်နား၍ဆေးရုံ၌ ပြန်လည်ဆေးစစ်ချက်ယူပြီးချိန် တစ်လခန့်အကြာတွင် ပရဟိတစိတ်ဓါတ်သစ်၊အားမာန်သစ်တို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် (ကျော် + ထွန်း)တို့သည် လောကကြီးအတွက် အသင့် "FIGHTING " ပါဟု။ ယနေ့ စနေနေ့(၇-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှ နေအိမ် သို့ စတင်ရွေ့ပါတော့မည်။ကျော်သူ၊ ထွန်းကိုကို " ဆိုပြီးတော့လည်း ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါ